အသုံးပြုသူအစည်းအဝေးဖြာ - 7Analytics
လွယ်ကူနှင့်ဖော်ရွေ။ ခြေရာခံရန်သင့်အသုံးပြုသူများသည်နှင့်ခရီး၊နယ်စည်းအဝေးများ၊စုဆောင်း heatmaps&နောက်ထပ်။
ဥာဏ်၏အသုံးပြုသူများအဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူတိုးတက်လာ၏။ စစ္ေသီးအသီးဧည့်လမ်းကြောင်းနှင့်သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်အပေါ်သင့်ဆိုဒ်မပါဘဲ intruding သူတို့ပါပဲ။
အဘယ်ကြောင့်သင်ဝန်ဆောင်မှုဒီလိုမျိုးနှိုင်းယှဉ်အခါအဖြာရရှိနိုင်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုအရေးပါသည်၊ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှအရောင်းသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုနှင့်သင်သာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်။ သင်ကဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်!
ဤသည်ရိုးရိုးအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကြည့်ဖို့ဧည့်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့သည်အဘယ်သို့၊သူတို့သွားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကဲ့သို့နားမလည်ကြဘူး။ သင်အလွယ်တကူနယ်သူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးနှင့်တွေ့မြင်အတိအကျအဘယ်အရာကိုသူတို့ပြုကြ၏။
“ ကုန္သြယ္မႈဆင် amet ထိုင်၊consectetur adipiscing elit။ Praesent finibus vestibulum porta။ ဆက်စပ်ပမွ quam။ Nunc မှာ nisi vel arcu placerat gravida။ Proin lacinia မ်ား porttitor၊sollicitudin အလွည့္က်အတွက်၊ornare။ Vivamus ဆးသူမ orci condimentum placerat အန္အန္ nisi။ နမ် velit libero၊hendrerit စာင္ႏ auctor eget၊congue ရခ်င္ပါ ante။ ”
“ Praesent finibus vestibulum porta။ ဆက်စပ်ပမွ quam။ Proin lacinia မ်ား porttitor၊sollicitudin အလွည့္က်အတွက်၊ornare။ Vivamus ဆးသူမ orci condimentum placerat အန္အန္ nisi။ နမ် velit libero၊hendrerit စာင္ႏ auctor eget၊congue ရခ်င္ပါ ante။ ”
“ ကုန္သြယ္မႈဆင် amet ထိုင်၊consectetur adipiscing elit။Ornare။ Vivamus ဆးသူမ orci condimentum placerat အန္အန္ nisi။ နမ် velit libero၊hendrerit စာင္ႏ auctor eget၊congue ရခ်င္ပါ ante။ ”
Andrea, Writter မှာႏွင့္မဂ္ဂဇင်း
300K သီခ်င္း ႏွ၊ႏွဝက်ဘ်ဆိုက်
0 ဧည့်ဖြစ်ရပ်များခြေရာကောက် ႏွ၊ႏွဝက်ဘ်ဆိုက်
0 အစည်းအဝေးပြိး ႏွ၊ႏွဝက်ဘ်ဆိုက်
3 ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ Heatmaps
မူပိုင်ခွင့်© 2021 7Analytics
ပြောင်းလဲဖို့မှောင်မိုက် ည့္ခ ပြောင်းလဲဖို့လင်း ည့္ခ